China mpanamboatra tariby vy nandrisika sy mpamatsy | Shoufan Metal
Ny galvanizing mafana dia milentika anaty vahaolana zinc nafanaina sy narendrika. Haingam-pandeha ny hafainganam-pamokarana, ary matevina ny firakotra. Ny hateviny farafahakelin'ny firakotra zinc avelan'ny tsena dia 45 microns, ary ny ambony indrindra mety mihoatra ny 300 microns. Mainty ny lokony, mandany zinc betsaka ...
Wire vy nandrisika
nandrisika Wire vy ao anatin'izany ny tariby elektrika mifono vy sy tariby voafafa mafana.
Zinc mifono: 1. Ny tariby vy mandeha amin'ny herinaratra dia 15-20g / m2. 2. Ny tariby vy nandrisika mafana dia 30-300g / m2
Mandranitra mafanadia milentika anaty vahaolana zinc nafanaina sy narendrika. Haingam-pandeha ny hafainganam-pamokarana, ary matevina ny firakotra. Ny hateviny farafahakelin'ny firakotra zinc avelan'ny tsena dia 45 microns, ary ny ambony indrindra mety mihoatra ny 300 microns. Mainty ny lokony, mandany zinc betsaka, mamorona sosona fidirana amin'ny metaly fototra, ary mahazaka fanoherana harafesina tsara. Ny fantson-drano mafana dia azo tazomina mandritra ny am-polony taona maro amin'ny tontolo ivelany.
Mandrisika mangatsiakaNy (galvanizing) dia dingana iray izay ahosotra tsikelikely ny metaly metaly amin'ny fandroana galvanika. Miadana ny hafainganam-pamokarana, ny fanamainana dia mitovy, ary ny hateviny manify, mazàna 3-15 microns fotsiny. Mifandraika amin'ny galvanizing mafana, ny vidin'ny famokarana electro-galvanizing dia ambany.
Fitaovana: tariby vy ambany kalitao ambany Q195
endri-javatra: malefaka tsara sy malefaka
zinc tahan'ny: 15g-250g / ㎡
hery matanjaka: 30kg-70kg / ㎡
tahan'ny elongation: 10% -25%
lanja / coil: 0.1kg-800kg / coil
Ny refy mahazatra: BWG34 – BWG4 izay 0.20mm – 4.0mm
Lanjan'ny coil: ny couleur tariby mandranitra dia afaka mamaly ny fangatahan'ny mpanjifa, misy coil kely sy lehibe misy.
Zava-kendreny: natao indrindra ho an'ny fananganana, harato, borosy, fitaovam-pifandraisana, fitaovam-pitsaboana ary tariby, sivana, fantsona avo lenta, asa-tanana, ary saha
Mampiavaka sy ny fampiharana: Zinc Coating avo miaraka amin'ny fanoherana ny harafesina super, mihamafy sy mifanaraka tsara amin'ny Zinc Coating, faritra malama, ampiasaina amin'ny fanenomana harato tariby sy famolavolana, be mpampiasa amin'ny indostria, ny fambolena ary ny fiompiana stock.
Package: 0.3-1000kg misy, fonosana anaty avy amin'ny fantsom-bokotra PVC, fonosana ivelany amin'ny lamba hessian na kitapo nylon any ivelany.
Ny tanjaky ny tady sy ny fikajiana tariby tariby
Faritra fiampitana tariby = m2 * 0.7854 mm2
Ny fihenan'ny tariby Newton (N) / faritra ampitan'ny faritra mm2 = tanjaka MPa
Ny habe hafa koa dia azo atao ho takiana aminao.
Previous: Tady tariby tsy misy tadiny
Manaraka: Tady vy nandrisika
Herinaratra vy mifono vy
Hot tariby nandrisika vy tariby
Wire Nail Wire
Vy Wire Coil
Wire Woven Wire
Tady tariby tsy misy tadiny